Wafdiga Kenya Maxay ka dooneen Somaliland? - BBC News Somali
Wafdiga Kenya Maxay ka dooneen Somaliland?
Lahaanshaha sawirka Safiya Cabdi Toori
Wafdi ka kooban xildhibaanno, ganacsato iyo dad ka socda ururada bulshada Kenya, ayaa magaalada Hargeysa uga qeybgalay munaasabadda xuska 18-ka May, oo jamhuuriyadda iskeed madaxbanaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland u aqoonsan tahay maalintii ay Soomaaliya ka go'day.
Safiya Cabdi Nuur oo ah xildhibaanka deegaanka Ijara ee Gaarisa, ee gobolka Waqooyi Bari Kenya, ayaa horkeceysay wafdigaasi oo ka qeybgalay munaasado lagu xusayay maalinta 18-ka May.
"Waxaan u imaanay inaan la dabaaldegno oo ugu hambalyeyno inta sannadood ee nabadda ay ku noolaayeen iyo shanta jeer ee doorashada ay qabteen, ayna ku guuleysteen in qeylo aysan ka soo yeerin iyo shaqada kala socoto ayaan ugu hambalyeyneynay", ayay tiri Xildhibaan Safiya oo la hadashay BBC Somali.
Waxay intaa ku dartay: "Way iska yartahay dad aan caawimaad heleynin oo dowladnimada kala wada, oo kala dambeyn leh, ammaan haysta. In badan baan imaaday oo aan arkay Somaliland iyo wadaninimada dadka ku jirto".
Safiya Cabdi Nuur ayaa Somaliland ku tilmaamtay in ay tahay "dal Soomaaliyeed oo walaal ah". "In aan ka soo qeybqaadano oo Somaliland la dabaaldegno oo wixii ay u baahan yihiinna aan ogaano oo aanna la fariisano, anaga keliyana ma imaan", ayey hadalkeeda ku dartay.
Xeer Ilaaliyaha Soomaaliya Axmed Cali Daahir
Sidoo kale waxay sheegtay in taariikhda Kenya iyo Somaliland ka dhexeyso ay aad u dheertahay oo ay soo socotay illaa xilligii gumeystihii Britain.
Mar ay ka hadlaysay arrimaha geeska Afrika waxay tiri: "Annaga waxaan ka tirsan nahay geeska Afrika. Dal kasta iyo bulsho kasta oo ka tirsan (dalalka) geeska Afrika, garab inaan u noqono waan ku qasbannahay, haddaan nahay Kenya. Sababtoo ah nabad ayaan rabnaa, ammaan baan rabnaa, midnimo ayaan rabnaa ".
"Soomaalida in ay ka baxaan waxa ay ku jiraan oo ay horey u socdaan oo ay horumar gaaraan oo garabka la is qabsado oon wada socono ayaan la rabaa. Meel kasta aan ku nool nahay sida Somaliland, Soomaaliya ama Xamar ha noqoto, Gilinka Shanaad, Jabuuti, Kenya iyo meel kasta", ayay tiri Xildhibaan Safiya.
Dib u milicsi: Kenya waxa ay xiriir dublamaasiyadeed la yeelanaysaa Somaliland
Image caption Dr Monica Juma wasiirka arrimaha dibedda Kenya
Wargeyska Afka dheer ee kasoo baxa magaalada Nairobi ayaa qorey in dowladda Kenya ay qorsheynayso in ay xafiis ka furato magaalada Hargeysa si loo yagleelo xiriir dublamaasiyadeed oo ka dhaxeeya Kenya iyo jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland.
Wargeyska ayaa sheegay in danjire lagu magacaabo Philip Mudia Githiora loo igmaday in uu xafiis ka furo Hargeysa, kadib markii sida la sheegay ay wadahadallo yeesheen wasiirka arrimaha dibedda Kenya Dr Monica Juma iyo wakiilka Somaliland ee Kenya Cumar Baashe.
Soomaalida Kenya siday uga falceliyeen khilaafka Kenya iyo Soomaaliya?
Wargeyska oo qoraalkiisa sii wata ayaa sheegay in Dr Juma ay kulan la yeelatay wasiirkii hore ee Somaliland Sacad Cali Shire.
Kulamadaasi kadib, wasiiradda Dr Juma ayuu wargeyska sheegay in ay warqad u qortay Xoghayaha Joogtada ah ee Shaqaalaha Rayidka ah Joseph Kinyua si uu u fududeeyo hawsha xafiiska cusub ee Hargeysa.
"Xiriir taariikhi ayaa nagala dhaxeeyey Kenya illaa xiligii gumeystihii, tallaabada ay Kenya qaadday in ay xafiis uga furato Hargeysa waxa ay sare u sii qaadaysaa iskaashi dhanka ganacsi iyo bulsho oo na dhexmara" ayuu wargeyska kasoo xigtay Cumar Baashe oo ah wakiilka Somaliland ee Kenya.
Somaliland ayaa bishii Diseembar ee sannadkii hore Nairobi ku qabatay shir arrimaha maalgashiga looga hadlayo, shirkaas oo uu furey wasiirka arrimaha dibedda Yaasiin Maxamed, kaas oo maalgashadayaasha Kenya ku dhiirogaliyay in ay ka faa'iideystaan fursadaha maalgashi jira.
Wakiilka Somaliland ee Kenya ayaa soo hadal qaaday ganacsiga qaadka Kenya oo uu sheegay in wax badan laga macaashayo, isaga oo sidoo kale ku taliyay in shirkadda diyaaradda ee Kenya Airways ay biloowdo duulimaadyo toos ah oo ay ku tagayso Hargeysa.
Wakiilka Kenya ay u igmatay arrimaha Somaliland Mr Githiora ayaa horey uga hawlgali jiray safaaradda Kenya ee Moscow, Ruushka.
Warkan uu wargeyska qoray ayaa imanaya xilli bilihii lasoo dhaafay uu madmadoow soo kala dhexgalay xiriirka Kenya iyo Soomaaliya, inkasta oo markii dambe labada dowladood ay sheegeen in ay isfaham ka gaareen wixii jiray.
Wargeyska Daily Nation: Kenya waxa ay xiriir dublamaasiyadeed la yeelanaysaa Somaliland
29 Abriil 2019
17 Febraayo 2019
Hadal heynta baraha bulshada qabsatay ee khilaafka Kenya iyo Soomaaliya
Lammaane is qaba ayaa barnaamij wareed daadihiya dalka Kenya